အချဉ်ဓာတ်သို့မဟုတ် alkaline - တစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူတို့ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်: activated ဒြပ်စင်များနှင့်အပြန်အလှန် acidifying alkaline များထုတ်လုပ်ပါတယ်။
အစားအသောက်များတွင်ဤအုပ်စုများ၏ထုတ်ကုန်၏ 80% အားဖြင့်ရေးစပ်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုနီးပါးအားလုံးစက်ရုံအစားအစာများပါဝင်သောကြောင့်သက်သတ်လွတ်စားလည်း, လွယ်ကူသောရှိသည်:
မှည့်သောငှက်ပျောသီး, ချိုမြိန်ပန်းသီး, Currant, ရက်စွဲများ, apricot, berry သီး (pH 8.0);
ဆလရီ, ထောပတ်သီး, ကြက်သွန်ဖြူ, မုန်လာဥနီ, Alfafa ဟာပင်ပေါက် (pH 8.0);
ချိုမြိန်စပျစ်သီး, သင်္ဘောသီး, ထုံး, စပျစ်သီးပျဉ်, သရက်သီး, ဖရုံ, စိတ်အားထက်သန်မှုအသီး, ချိုမြိန်သစ်တော်သီး, ကီဝီ, သခွားမွှေးသီး, နာနတ်သီး, ဇီးသီး (pH 8.5);
Cayenne ငရုတ်ကောင်း, agar-agar, ရွက်, ကညွတ်, ပင်လယ်ရေညှိ, parsley, chicory, အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည် (pH 8.5);
ဖရဲသီး, သံပုရာ (pH 9.0) ။
အဆိုပါရွေးချယ်မှုသည်ကြီး, သင်မူကားမကြာမီက 3-4 ပတ်ကြာသည်ဤအစားအစာများကိုစားရန်အတော်လေးခက်ခဲကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည် - နှင့်အစားအသောက်များတွင်ကအနည်းဆုံး 21 ရက်ကြာရှည်သငျ့သညျ။ ထို့ကြောင့်အက်ဆစ်၏အုပ်စုအနေဖြင့်ယူထုတ်ကုန်များ၏ 20% ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအက်ဆစ်-alkaline များတဲ့အစားအစာကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်တူညီသောအဆင့်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချိန်ခွင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တိုးပွားလာအချဉ်ဓာတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစာအိမ်၏အက်ဆစ်-ဖွဲ့စည်း function ကိုသက်ဝင်စေသည်ဟုထုတ်ကုန်များကလွယ်ကူချောမွေ့နေပါတယ်။
ငါး, အသား, ကြက်ဥ,
alkaline အစားအသောက်များတွင်လက်တွေ့ကျကျမီနူးအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုတစ်အစားအသောက်များတွင်ရှိသင့်ပါတယ်အဖြစ်တစ်ဦးကိုအတည်ပြုအမဲသားကို-စားချင်သောသူ၏ပတစ်ခုဖြစ်သည်သူမည်သူမဆိုအဘို့အတော်လေးခက်ခဲသည်။ ဟုတ်ကဲ့, လက်ဖက်ရည်ပါတီများအနေဖြင့်သီးဖျော်ရည်၏မျက်နှာသာအတွက်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။
alkaline အစားအသောက် Menu ကို
အက်ဆစ်စွန့်ပစ်၏ကိုယ်ကိုသန့်စင်သည်မတိုးတက်မှုပထမဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်လျှင်ပင်, သုံးပတ်ကြာမှထွက်ကိုင်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်။ သို့သော်သန့်ရှင်းရေးနေစဉ်အတွင်းယေဘုယျအားဖြင့်မမှန်သလိုခံစားရတယ်။ အစားအသောက်များတွင်တဖြည်းဖြည်းအလိုရှိသောထုတ်ကုန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်, သုံးရက်ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ 7-8 ညနေပြီးနောက်ရှိသမျှမုန်တားမြစ်ထားကြသည်။ ထို့ကြောင့်အနီးစပ်ဆုံး menu က:
နံနက်စာ: ထောပတ်နှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏သုပ်, မုန့်တချပ်သို့မဟုတ်မီးဖုတ်ထားသော အာလူး။
နေ့လည်စာ: သေးငယ်တဲ့ကြက်သား / ငါး / အသား (အခြား) ၏အပိုင်းအစ + ဆီနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်။
ရေစာ: အသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်, မည်သည့်အသီး။
ညစာ: ပေါင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်ဟင်းရွက်ဟင်းချို (မျှအသားဟင်းရည်) ။
ဒီအစားအစာတွင်, သငျသညျကိုယျခန်ဓာကို clean နိုင်ပါတယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအပိုကီလိုဖယ်ရှားပစ်ရန်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သန့်စင်ခြင်းနှင့်အသစ်သောအစားအစာကိုမှအဆင်ပြေအောင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒုတိယအပတ်ကအသုံးပြုပုံသင်အများကြီးပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးလုံ့လရှိသူဟုခံစားရပါလိမ့်မယ်။
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ပဲအစားအသောက်များတွင် - ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်အကောင်းဆုံး
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ဂျုံယာဂုအပေါ်အစားအသောက် - မီနူး
အစားအသောက် "မဂ္ဂီ" - Menu ကို
7 ရက်အတွင်းအဘို့အ detox အစားအစာ
ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဂျြောဂြီယနျအတွက် Satsivi ငါး
ကိတ်မုန့် "မြင်းကျား" - စာရွက်
ဝက်အူသွေးထွက် - သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို?
ဟင်း - ကအပေါ်အခြေခံပြီး piquant ငံပြာရည်စာရွက်နှင့်ဟင်းလျာများ
BBQ Wings - ဆေးညွှန်း